बागलुङ नगरको प्राथमिकता : पूर्वाधार, आर्थिक र सामाजिक विकास::Online News Portal from State No. 4
के के ग¥यो बागलुङ नगरपालिकाले दुई वर्षमा
– यो अवधिमा लामो समयदेखि निर्माणको पर्खाइमा रहेको बृहत्तर बागलुङ बसपार्क निर्माणको काम सुरु गरिएको छ ।
– बागलुङ नगरपालिका– १ बाङ्गेचौरदेखि कुश्मा नगरपालिका – १ पाङ अदुवावारी जोड्ने सम्भवत एसियाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल शिलन्यास गरी कार्य आरम्भ भएको छ । वडा नं. ४ उपल्लाचौर–नाग्लीवाङ जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सर्वे गरिएको छ ।
– सडकलाई दीर्घकालिन बनाउँन बानपा– १, २, ३, ४, ६, ७, ८, ९, १३ र १४ का मुख्य, शाखा तथा भित्री गरी एक किलोमिटर सडक ढलान तथा कालोपत्रे गरिएको छ ।
– सदरमुकाम बागलुङ बजारको खानेपानीे समस्याको समाधानका लागि काठेखोलाबाट लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि बागलुङ नगरपालिकाको सहलगानीमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिका – ४ को कुँडुले, तल्लोपाखाथर, रमेटार, वडा नं. ३ र ४ का उपल्लो भेग र वडा नं. ६ को तल्लो भेग तीनतले, रातमाटा लमगाउँ पाखाथरमा लिफ्टिङ प्रविधिबाट एक घर एक धाराको अभियान अन्र्तगत खानेपानी आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । नगरपालिकाको एक घर एक धारा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै जाने नगरपालिकाको अभियान अन्तरगत वडा नं. ४ कुँडुले, वडा नं. ६ को लहरेपिपल, वडा नं. १३ को रोकापालामा काम भइरहेको छ । वडा नं. ८ को लामिचौर तथा वडा नं. ३, वडा नं. ७ र वड ा नं. ९ का खानेपानी आयोजनाको डिपिआर तयार पारिएको छ ।
– नगर क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित तारहरु हटाउँने अभियान सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अव्यवस्थित तार हटाई इन्सुलेसन तार तथा नेपाल टेलिकमले फाइवर तार विस्तार गरी अनावश्यक तारहरु हटाउँने काम अन्तिम चरणमा छ । अबको केही समयभित्रै बागलुङ बजार अव्यवस्थित तार रहित क्षेत्र हुनेछ ।
– विश्व बैंकको सहयोगमा बागलुङ बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित ढल निकासका लागि डिपिआर गर्ने काम सुरु भएको छ ।
– बजार क्षेत्रका चोक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत बागलुङ नगरपालिका–२ को हल्लनचोक, शिवधाराचोक, जिपपार्क–पुस्तकालय चोक, नौविसेटोलमा ढलान गरी चोक सुधार गरिएको छ ।
– नगरका सबै वडा कार्यालय जोड्नगरी निर्माण गरिएका बागलुङ नगरका गौरव र समृद्धिका आयोजना निर्माणका लागि द्रुत गतिमा काम भइरहेका छन् ।
– बागलुङ बजारमा आधुनिक सिटी हल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सकिएको र जग्गा प्राप्ती हुँदासाथ सिटी हल निर्माणको सुभारम्भ हुनेछ ।
– बागलुङ नगरपालिका–३ मा रहेको बसपार्कको स्वामित्व बागलुङ नगरपालिकामा ल्याइएको छ ।
– नगर क्षेत्रमा उद्योग ग्राम क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरी सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
– नगरका सबै वडा कार्यालयसम्म सडक यातायातलाई सरल र सहज बनाई ग्रामिण क्षेत्रलाई बजारसँग आवद्ध गर्नका लागि ६१ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन गरी सडकहरुको स्तरबृद्धिको काम भइरहेको छ ।
– जनसहभागितामा शहरी सडक कालोपत्रे कार्यक्रमहरु नियमित सञ्चालनमा ।
– नगरपालिकाले आफ्नै डोजर खरिद गरी मर्मत सम्भारका कामहरु भइरहेका छन ।
– बागलुङ नगरपालिका अन्र्तगत पशु स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोगशालाको संरचना निर्माण गरिएको छ ।
– नगरपालिकाले आफ्नै मातहतमा रहने गरी कृषि प्राविधिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छ ।
– नगरको वडा नं. २ रुद्रेपिपलमा आधुनिक सित भण्डार र वडा १२ मा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माणको काम हुँदैछ ।
– बागलुङ नगर क्षेत्रका माथिल्लो भुभागमा व्यवसायीक चिया खेती विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ९ हजार विरुवा रोपण गरिएको छ । चालु आवमा चिया खेती विस्तार र तालिमको ब्यवस्था गरिएको छ ।
– नगरलाई फलफुल र सुन्तलामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित चार हजार फलफुलका विरुवा र ९ हजार सुन्तलाका विरुवा वितरण गरी बगैचा सुन्तला खेतीको सुरुवात गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विरुवा खरिद गरी कृषकलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नगरलाई एक वडा एक उत्पादनमा जोड दिने नीति अनुरुप वडा नंं ८, ९, १० र १३ लाई सुन्तला जोन र वडा नं. ११ लाई बाख्रा स्रोत केन्द्रको रुपमा रुपमा विकास गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ ।
– बागलुङ नगरलाई घाँसको विउमा आत्मनिर्भर बनाउँने उद्देश्य सहित व्यवसायीक रुपमा पशुपालन गरिरहेका किसानहरुलाई चालु आ.व.मा मात्र करिब २ हजार किलोग्राम घाँसको विऊ वितरण गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षदेखि बागलुङ नगरपालिकाका वडा नं. ४, १२, १३, १४ लाई घाँसको विउ स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरी घाँस निर्यात गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
– कृषि उत्पादनलाई सहजै उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन वडा नं. ३ विद्युत कार्यालयको ठिक पछाडी कृषि तरकारी संकलन तथा बिक्री केन्द्र (हाट बजार) निर्माण कार्य भै रहेको छ ।
– ‘गरिवीसँग मेयर ऋषिराम’ कार्यक्रम अन्र्तगत नगरका विपन्न समुदायका खरका छानो हटाई टिनको छानोमा ल्याउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।
– व्यवसायीक कृषि तथा पशु विकास अनुदान कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ ।
– वडा नं. ९ तित्याङ र ११ रायडाँडामा रहेका सम्भाव्य खानीको अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा खानी उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाइदैछ ।
– सडक निर्माणका क्रममा घरवास गुमाइ बाङ्गेचौर खेल मैदान आसपास यत्रतत्र छरिएर बस्दै आएका माझी समुदायलाई एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरी आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।
– बागलुङ नगरपालिका अन्र्तगत अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र र मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
– असहाय तथा दिर्घरोगिहरुको उपचारमा पहुंचयोग्य वनाउन जोड दिईएको छ ।
– बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका सडक सौर्य वत्तिलाई आवश्यक मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गरिएको छ । चोकहरुमा रहेका सिसी क्यामेराको मर्मत र नयाँ सिसी क्यामेरा जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
– नगरको भुगोल, जनसंख्या र कार्य जिम्मेवारी फराकिलो हुदै गएको, जुनसुकै बेलापनि कार्य व्यवस्थापनमा जुटीरहनु पर्ने र बजारक्षेत्र भन्दा न.पा. कार्यालय अलिकति टाढा रहेकाले नगरका मुख्य मुख्य कामहरु सञ्चालन गर्नेगरी बागलुङ बजारमा कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
– गत आर्थिक वर्षमा “हाम्रो बागलुङ नगर” रेडियो÷टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन तथा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चारमाध्यम सञ्चारकर्मी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी तथा समय–समयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरका गतिविधिहरुलाई पारदर्शी बनाईएको छ ।
– जेखिमपुर्ण श्रम दुर्घटनामा परेकाहरुलाई सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
वातावरण विकास ः
– फोहोरमैलाबाट वैकल्पिक उर्जा उत्पादनका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा नगरपालिकाका तर्फबाट सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाताको छनोट भएको छ ।
– नगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकारीसँगको साझेदारीमा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ल्याण्डफिल्ड साईटको व्यवस्था गरिएको छ ।
– नगर क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित पार्किङको कार्यआरम्भ गरिएको छ ।
– नगरको मालिका क्षेत्रमा न्भययिनष्अब िएबचप निर्माण सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरि डिपिआरको चरणमा छ । कालिका भगवती गुठी र वागलुङ नगरपालिकाको सहकार्यका कालिका मन्दिर परिसरमा कालिका वन्यजन्तु संरक्षण पार्क निर्माण गरिएको छ ।
– व्यवस्थापनको अभावमा रहेका वडा नंं १ र २ मा रहेको शहिद स्मृति पार्क र उद्यानको पुन निर्माणको लागि प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी कार्यथालनी गरिएको छ ।
– बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ बाङ्गेचौर खेल मैदानलाई रङ्गशाला निर्माणका लागि केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
– बजारमा व्यवस्थित क्रिकेट तालिम मैदानका लागि नगरपालिकाकै आर्थिक लगानीमा तालिम केन्द्र निर्माणको काम भएको छ ।
– वडा नं. ४ को वडारचौरमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद मैदान, दारेगौडामा क्रिकेट मैदान, वडा नं. ८ को बौडेचौर, वडा नं. ९ को आलेखर्क, वडा नं. १० को निफन्नी तथा भकुण्डे खेल मैदानलाई नगरस्तरीय खेल मैदानको रुपमा विकास गर्नका लागि निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
– गत आर्थिक वर्षमा मेयरकप फुटबल सम्पन्न गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय स्तरको मेयरकप फुटबल प्रतियोगिता गर्ने कार्यक्रम छ ।
– नगर स्तरीय खेकलुद विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भइसकेकाले वडा तथा नगर स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्र ः
– नगरको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बलेवा–भैरवस्थान–भकुण्डे–पञ्चकोट पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । शालिग्राम संग्राहलयदेखि पञ्चकोटसम्मको पदमार्ग निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
– बागलुङ कालिका मन्दिर, पञ्चकोट, मालिका, भकुण्डे, वोडेईचौर, भैरवस्थान, सिलग्राम संग्राहलय, गौरीधाम, निरयघाट जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थालको बृहत्तर विकासका लागि काम भइरहेको छ ।
– वडा नं. १४ मा रहेको धौलागिरी अञ्चलको एक मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट भएको पहल अनुसार संघीय सरकारबाट विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
– नीजी क्षेत्रबाट यस नगरपालिकाको नारायणस्थानमा निर्माणाधिन बन्जीजम्प, स्वीङ, स्काइ साइकिलिङ निर्माणका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।
– नगरको पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेको प्रचार प्रसारका नगरपालिकाको सक्रियताकै कारण युरोपमा पर्यटनसँग सम्बन्धीत भेगन ग्रुपको टोली नगर क्षेत्रको पर्यटन विकासकालागि आउँने निश्चित भएको छ ।
स्वीकृत भएका ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु ः
बागलुङ नगरपालिकाको दुई वर्षको अवधीमा ४ वटा नगरसभा, ४० वटा कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएका छन् । उक्त नगरसभा तथा बैठकबाट ११ वटा ऐन, २ वटा नियम, १४ वटा कार्यविधि तथा २ वटा निर्देशिका पारित गरिएको छ । नगरपालिकाले पारित गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
क) ऐनहरु ः
१) आर्थिक र विनियोजित ऐन २०७४
२) आर्थिक र विनियोजन ऐन २०७४
३) नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७४
४) कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४
५) सहकारी ऐन २०७४
६) स्थानीय तह प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५
७) न्यायीक कार्यसम्पादन कार्यविधि ऐन २०७५
८) सार्वजनिक निजी साझेदारी किवास अध्यादेश २०७५
९) सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७५
१०) फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन २०७५
११) विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन २०७५
ख) नियमहरु ः
१) शिक्षा नियमावली २०७४
२) प्रमाणिकरण सम्बन्धी नियमावली २०७४
ग) कार्यविधिहरु ः
१) बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४
२) नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४
३) आचारसंहिता जनप्रतिनिधि २०७४
४) स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
५) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
६) लेखा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७४
७) अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५
८) उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
९) निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
१०) नगर स्तरीय खेलकुद विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
११) भगत सर्वजित विश्वकर्मा सिप तथा रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिः २०७५
१२) गरिबसँग मेयर ऋषिराम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
१३) भवन निर्माण अनुमती सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
१४) अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधी २०७५
घ) निर्देशिकाहरु ः
१) बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४
२) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५
बिषयगत समिति गठन ः
नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकाबाट गठन हुने समितिको गठन भई कार्य सम्पादन भइरहेको छ । बागलुङ नगरपालिकाबाट गठन भएका समिति तथा उक्त समितिहरुबाट भए गरेका कामहरु निम्नानुसार छन ।
१) न्यायीक समिति ः
नेपालको संविधान बमोजिम नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था अनुसार नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको कार्यालय सञ्चालन भई नगर क्षेत्रमा हुने न्यायीक कामहरु भइरहेका छन् । न्यायीक कार्य सम्पादन ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । सो बमोजिम न्यायीक इजलास सञ्चालन भइरहेको छ । अहिलेसम्म २८ वटा मुद्धा न्यायीक समितिमा परेकोमा २० वटा मुद्धा फस्र्यौट भएका छन र अन्य मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा छन ।
२) विषयगत समिति गठन ः
नगरपालिकाका विभिन्न कार्यहरुमा देहायका अनुसार विषयगत समितिहरु कार्यमा रहेका छन् ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा क्षमता विकास समिति
– पुर्वाधार विकास समिति
– आर्थिक विकास समिति
– सामाजिक विकास समिति
– विधेयक समिति
– वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति
– सुशासन तथा वित्त व्यवस्थापन समिति
शिक्षा क्षेत्र ः
– नगरको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार योजना निर्माण गरी लागु गरिएको छ, नगर शिक्षा नियमावली जारी गरिएको छ ।
२– विद्यालय बालमैत्री बनाउन विद्यालय बगैचाको सुरुवात गरिएको छ ।
– परीक्षा प्रणाली र व्यवहारिक शिक्षाका लागि विद्यालयमा लघु कृषि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
–शिक्षक नियुक्ति निष्पक्ष पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइएको छ ।
– प्राथमिक तहमा गणित तथा अंग्रेजी विषयबाट पढाई सुरु गरिएको छ ।
– सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा विद्यालयलाई स्थगन तथा समायोजन गरि सञ्चालन गरिएको छ ।
– प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुको नेतृत्व विकासमा सहयोग गरिएको छ ।
– कक्षा १ देखि १२ लाई दिवा सेवामा सञ्चालन गरिएको छ ।
– आइ.सि.टी. र ल्याव व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ ।
–विद्यालयहरुमा किशोरी छात्राहरुको लागि सेनेटरी प्याड वितरण गरिदै आएको छ ।
–विभिन्न वडामा रहेका बालविकास केन्द्रको सुदृढिकरण गरिएको छ ।
–सबै माध्यामिक विद्यालयहरुमा अनलाइन सफ्टवयर प्रणालीबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
– सबै माध्यामिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र ः
– धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेख्य पहल गरेको छ ।
– नगरपालिकाले एचआइभी संक्रमित, विपन्न तथा मुस्लिम समुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
– घनाबस्ती तथा स्वास्थ्यचौकी पुग्नका लागि लामो समय लाग्ने वडा नं. १२ तल्लो सरंगी र १३ को बाँस्कोटमा सामुदायीक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरी नगरपालिकाको आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
– हरेक स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभाव हुन नदिनका लागि औषधी आपूर्तिका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– विपन्न औषधी उपचार सिफारिसलाई छिटो छरितो तरिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– नगरका तीन वटा स्थानमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनकको व्यवस्था गरिएको छ ।
–बागलुङ नगरपालिकालाई पूर्ण खोप युक्त घोषणा गरिएको छ ।
–सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा अनलाइनमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको छ ।
– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको आधारभूत तालिम तथा पुर्नगठन गरिएको छ ।
–सडक मापदण्ड र भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
– जनप्रतिनिधिलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर र मापदण्ड सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
– वडा नं. १, २, ३, ४ मा भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण, नगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइएको छ ।
– निर्माणकर्मी (नाइके डकर्मी) लाई सात दिने तालिम दिइएको छ ।
–नक्सा बनाउँने कन्सल्ट्यान्टहरुको सूचीकृत गरी नक्सा मापदण्ड लगायतका विषयमा तालिम दिइएको छ ।
– नक्सा पास अनुमती प्रक्रियाको कार्यविधि बनाइ कार्य गरिएको छ ।
– घर निर्माण ठेकेदारलाई निर्माण प्रमाण प्रमाणपत्र बिना निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ ।
– नक्सापास अनुमती प्रक्रिया कार्यविधि अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र राजश्व लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
– नगरपालिका बन्नु भन्दा पुर्व बनेका घर निर्माणहरुलाई राजश्व, पानी, विजुली सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
राजश्व संकलन ः
बागलुङ नगरपालिकाको आन्तरिक कर दस्तुरतर्फ यस वर्षको बैशाख मसान्तसम्म विभिन्न शीर्षकबाट रु. २ करोड ३४ लाख ८३ हजार २ सय ३८ रुपियाँ कर संकलन भएकोे छ । टेबलमा हेर्नुस् चालु आ.व.का योजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था (२०७६ बैशाख मसान्तसम्म) ः